Nikeza isitikha seHologram, ileyibhile yeHologram, ileyibhile yoKhuseleko evela kuMvelisi waseChina
Isitika selebheli yoKhuseleko
Isitika selebhel yokhuseleko
Tsala isincamathelisi selebheli yokhuseleko
Isitika seeleyibheli yoKhuseleko yeQR
Uluhlu lweNqaku lelebheli yoKhuseleko
Ibhakhowudi yoKhuseleko lwelebheli yoKhuseleko
VOID Ukhuseleko lwelebheli yoKhuseleko
Isitika selebheli yoKhuseleko kwiHologram
Isitika selebheli yeHologram
Isincamathelisi selebheli yeQR
Uluhlu lweNombolo yeHologram yeeleyibhile
Isitika selebheli yeBhakhowudi yeHologram
VOID Hologram Label Isitika
Isitika selebheli yeHologram ye-3d
Tsala isincamathelisi selebheli yeHologram
Ukhuseleko lwelebheli yoKhuseleko
Ukuphazamisa Ubungqina belebheli yoKhuseleko
AmaTywina ePhepha anokubakho
I-Eggshell yePhepha eliSebenzayo lePhepha
Ukushicilela kweLayibhile yokuNamathela
I-Shenzhen Tuteng Anti-Counterfefeing Co., Ltd. yasekwa ngo-2001, ebekwe e-Shenzhen yase Guangdong, China. Ikhethekileyo kumava eminyaka engama-20 kwiphakheji kunye nokushicilela.
Inemithombo emininzi, ukuthuthwa okufanelekileyo, kunye neqela loyilo lobuchule, iqela elisebenzayo lokuthengisa.
Ingumnikazi wamagumbi asemgangathweni, ngaphezulu kwe-3000 yeemitha zesikwere sendawo yefektri.
Inabasebenzi abamalunga nama-80 (kuquka umzi-mveliso kunye neofisi). Inkampani yethu amkele SGS.
Iimveliso zithengiswa kwihlabathi liphela njengeYurophu neMelika, mpuma Asia Asia, Mpuma Mpuma njalo njalo.
Umzi-mveliso ulandela umgaqo-nkqubo kumthengi ngowokuqala, umgangatho wokuqala kunye nenkonzo kwindawo ekumgangatho ophezulu.
Izixhobo zenkampani yethu zilungile, ubuchwephesha buqhubekile. Ukusukela ekusekweni kwayo, inkampani iqhubeka nokuphila ngokukholelwa: ukuthengisa okunyanisekileyo, olona mgangatho uphezulu, kunye nesibonelelo kubathengi.
Imveliso yethu iphambili yileyibhile yehologram, ileyibhile yokuncamathela, istamping eshushu eshushu, isitampu seqokobhe leqanda, isitikha esiethe-ethe, iteyiphu engavumelekanga, isitikha sokuthintela ukuphazamiseka njalo njalo.
Inkqubo yokusebenza iyayenza ifayile --- ipleyiti yesinyithi --- eshushu isitampu se-foil --- esenza i-glue-silkscreen -i-cut cut-split into roll-QC yokuhlola-ukupakisha kwibhokisi-- ithunyelwe kwiarhente yokuhambisa-inikezela ngenombolo yokulandela umkhondo .
Siyathembisa ukuba siyakuba noxanduva kude kube sekupheleni xa inkonzo yethu iqala. Sijonge phambili ekufumaneni imibuzo yakho kunye nokuseka ubudlelwane beshishini lwexesha elide ukuze sizuze ngokufanayo.
Jonga Kaninzi Ndwendwela i-Factory
Ukuthumela ngaphandle Ipesenteji
Ukuqengqa umbuliso we-4 ileyibhile yehologram
Qengqeleka umnyama enkosi kuwe
Enkosi ngombuliso wesitika
Umbhalo webhakhowudi umbala weQR wekhologram yesitikha
Ukutshintsha umbala weQR code hologram
Uyilo olushushu lwelebhile yehologram
krwela istikha sehologram
Ileyibhile ye-3D holographic laser yesiselo sokutya esineendleko
Iteyiphu yoKhuseleko engenanto
Ilebhile yeLaser yeLologram ye3d
Ukuthintela iilebhile yehologram ebonakalayo
Ikhaya Imveliso Ngathi Iindaba Uqhagamshelwano Izixhumanisi Sitemap Uphando
Copyright © 2021 Shenzhen Tuteng Anti-Counterfeiting Co., Ltd. Wonke amalungelo agcinwe. Ixhaswa ngu